Izindaba - Ukwakhiwa kwenqubo ye-carbon fiber
Ukwakhiwa kwenqubo ye-carbon fiber
Inqubo yokwenza i-carbon fibre ehlanganisa indlela yokubumba, indlela yokunamathisela ngesandla ngesandla, indlela yokucindezela eshisayo yesikhwama se-vacuum, indlela yokubumba yokugoqa, kanye nendlela yokubumba ye-pultrusion.Inqubo evame kakhulu indlela yokubumba, esetshenziswa kakhulu ukwenza izingxenye ze-carbon fibre auto noma izingxenye zezimboni ze-carbon fibre.
Emakethe, amashubhu esiwabona ngokuvamile enziwa indlela yokubumba.Okufana namashubhu e-carbon fibre ayindilinga, izinduku ze-carbon square, ama-octagonal boom kanye nezinye izinhlobo zamashubhu.Wonke amashubhu e-carbon fiber akhiwe ngesikhunta sensimbi, bese kuba ukubunjwa kokucindezelwa.Kodwa zihluke kancane ohlelweni lokukhiqiza.Umehluko omkhulu ukuvula isikhunta esisodwa noma ezimbili.Ngenxa ye-tube eyindilinga ayinalo ifreyimu eyinkimbinkimbi kakhulu, ngokuvamile, isikhunta esisodwa kuphela sanele ukulawula ukubekezelelana kokubili kobukhulu bangaphakathi nangaphandle.Nodonga lwangaphakathi lubushelelezi.kuyilapho amashubhu eyisikwele se-carbon fiber nezinye izimo zamapayipi, uma kusetshenziswa isikhunta esisodwa kuphela, ukubekezelelana ngokuvamile akulula ukulawula futhi ubukhulu bangaphakathi bubuhlungu kakhulu.Ngakho-ke, uma ikhasimende lingenayo imfuneko ephezulu mayelana nokubekezelelana kubukhulu obungaphakathi, sizoncoma ukuthi ikhasimende livule kuphela isikhunta sangaphandle.Le ndlela ingonga imali.Kodwa uma ikhasimende linezidingo zokubekezelelana kwangaphakathi, lidinga ukuvula isikhunta sangaphakathi nangaphandle ukuze sikhiqize.
Nasi isingeniso esifushane sezinqubo ezahlukene zokwakha imikhiqizo ye-carbon fiber.
1. Indlela yokubumba.Faka i-Prepreg resin esikhunjeni sensimbi, uyicindezele ukuze igcwale ingcina eyengeziwe, bese uyelapha ekushiseni okuphezulu ukuze wenze umkhiqizo wokugcina ngemva kokudilizwa.
2. Ishidi le-carbon fiber elifakwe ngeglue liyancishiswa futhi lifakwe i-laminated, noma i-resin ixutshwe ngenkathi ibeka, bese icindezelwa ngokushisa.
3. Isikhwama se-vacuum indlela yokucindezela eshisayo.Laminate esikhunjini bese uyimboza ngefilimu engamelana nokushisa, cindezela i-laminate ngephaketheni elithambile bese uyiqinisa ku-autoclave eshisayo.
4. Indlela yokubumba yokugoqa.I-carbon filament monofilament ilinyazwe ku-carbon fibre shaft, elungele ukwenza amashubhu e-carbon fibre kanye nemikhiqizo ye-carbon fibre engenalutho.
5. Indlela ye-pultrusion.I-carbon fiber ingena ngokuphelele, i-resin eyengeziwe kanye nomoya kukhishwa nge-pultrusion, bese iphulukiswa esithandweni somlilo.Le ndlela ilula futhi ilungele ukulungiselela izingxenye ze-carbon fiber rod kanye ne-tubular.